स्कुल बन्द गरेर मात्र कोरोना रोकिँदैन « News of Nepal
स्कुल बन्द गरेर मात्र कोरोना रोकिँदैन
२७ पुष २०७८, मंगलवार ०८:५३
कोरोनाबाट जनता बचाउन उचित कदम चालौं । ढिलासुस्तीका कारण कोरोनाले विकराल रुप लिन सक्छ । नेपालमा कोरोनाको त्रास बढ्दो छ । केही दिनयता कोरोनाका बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हिजो हजार बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । कतिपय मृत्युको मुखमा छन् भने कतिपय अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन् । तर कतै पनि कोरोनाको परीक्षण प्रभावकारी रुपमा भएजस्तो देखिँदैन । उदाहरणका लागि कालिमाटी तरकारी बजारलाई नै लिऔं । कालिमाटी तरकारी बजारमा राति २ बजेदेखि सामान किन्नेको भीड हुन्छ । त्यो भीडमा अधिकांश मास्क नलगाएकै देखिन्छन् । सामाजिक दूरी पालना गर्नु त्यहाँभित्र असम्भवझैँ देखिन्छ । मुलुकभरका अधिकांश तरकारी बजारहरुमा यस्तै भीड छ ।
यहाँबाट कोरोनाले तीव्रता लिन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ । बल्खु, तीनकुने, धुम्बाराही तरकारी बजार उपत्यकाको सबभन्दा धेरै भीड हुने स्थानहरु हुन् । तरकारी र फलफूल किन्ने नाममा कोरोना सल्किएको कसैलाई पत्तो छैन । आफू संक्रमित भएर समाज र घरपरिवारमा सार्ने काम हामीबाट भइरहेको छ ।
भीडभाड हुने स्थानहरुमा सरकारी निकायको आँखा पुगेको छैन । त्यस्तो स्थानमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको छ/छैन भनेर अनुगमन गरिएको छैन । हालका लगि भीडभाड हुने स्थान बन्द गर्नु नै उचित देखिन्छ । विश्वका हरेक मुलुक कोरोनाका चपेटामा परेका छन् । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोनाले तहल्का मच्चाएको छ । भारतबाट गाडीभरि हरियो तरकारी, फलफूल आयात भइरहेको छ । सामान ल्याउने चालक, सहचालकलाई कोरोना लागेको हुन सक्ने भए पनि परीक्षण गरिएको छैन । यस्तो लापरबाही भएको देख्दा सरकार छ जस्तो लाग्दैन । कोरोना बाँकी छ र ? भन्ने प्रश्न यस्तो भीडले दर्शाउँछ ।
तरकारी बजारको भीडले कोरोना संक्रमितको उत्पादन गर्दै छ । यी बजारहरु कोरोना फैलाउने कारखाना बनेका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्न उपत्यकाका जिल्ला प्रमुखहरुले चासो दिएका छैनन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सिडियोहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बहनमा चासो नदेखाएजस्तो देखिन्छ । उपत्यकाका बासिन्दाहरु कोरोना लागेर मर्ने त होइन ? भन्ने चिन्तामा बसेका छन् । जिल्ला प्रमुखहरुको लापरबाही र ढिलासुस्तीले कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् । सबभन्दा धेरै जनसंख्या उपत्यकाभित्र छ भने सबभन्दा धेरै लापरबाही पनि यहीँ नै छ । उपत्यकामै सबभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् भने कोरोनाको संक्रमित पनि यहीँ नै बढी भेटिरहेको छ । उपत्यकाभित्रको नाकामा कसरी कडाइ गर्ने ? उपत्यकावासीलाई कसरी बचाउने ? भनेर जिल्ला प्रमुखहरुले एकचोटि पनि छलफल गरेका छैनन् ।
सिडियोहरुले छलफल नगर्नु भनेको कोरोनालाई बेवास्ता गरिएको हो । सर्वसाधारणलाई जोगाउन के–कस्ता पूर्वतयारी गर्ने हो भन्ने बारे सूचना निकाल्ने काम पनि यिनीहरुबाट भएको छैन । जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने यी तीन जिल्लाका प्रमुखहरुको सरुवाको लागि गृह मन्त्रालयसँग माग राखिएको छ । राजधानीमा सञ्चालित सुपरमार्केट तथा व्यापारिक मलहरुमा कोरोना मापदण्ड पालना भएको छैन । यस्ता व्यापारिक मलहरुमा मानिसहरुको भव्य भीड देखिन्छ । भाटभटेनी, सेल्सबेरी, बिग मार्टलगायतका मलहरुमा धेरै मानिसहरुको हुलमुल रहेको पाइन्छ । गाडी मर्मत गर्ने वर्कसपहरुमा पनि त्यस्तै छ ।
वर्कसपमै काम गर्ने मिस्त्रीको मुखमा मास्क छैन । सामाजिक दूरीको पालना भएको छैन । गाडी बनाउनेदेखि बनाउन लगाउनेले समेत कोरोनालाई ख्यालख्याल गरेको प्रस्ट्याइरहेको छ । बैंक, फाइनान्स तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुमा समेत धेरै भीडभाड छ । त्यहाँ पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको छैन । यता, सार्वजनिक सवारीसाधन र फुटपाथहरुमा पनि त्यही हाल छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेहरुको पनि लापरबाही देखिएको छ । त्यहीमाथि सहचालकले भेडाबाख्रा कोचेभन्दा धेरै मान्छे कोच्छन् । मास्क लगाएकाले पनि नलगाउन सक्ने स्थिति बन्छ । यो पनि कोरोना फैलाउने प्रमुख कारण हो ।
अहिले पनि फिल्म र म्युजिक भिडियोको सुटिङ भइरहेको छ । एउटा सानो म्युजिक भिडियो बनाउन सयौंको संख्यामा मान्छे चाहिन्छ भने त्यहाँबाट कोरोना फैलिन सक्छ । एउटालाई कोरोना रहेछ भने सबैमा सल्किन्छ । त्यही भएर हालका लागि फिल्म तथा म्युजिक भिडियो सुटिङ नगर्नु नै जाती हुन्छ । त्यस्तै, सरकारले फिल्म हल खोल्न अनुमति दिएको छ तर फिल्म हल पनि कोरोना फैलाउने कारखाना बन्न सक्छ । फिल्म हलमा आउने दर्शक केही गरी संक्रमित रहेछ भने सबमा सल्किन्छ । फिल्म हल खोल्न दिनु भनेको कोरोनालाई निम्तो दिनु हो । मनोरञ्जनको नाममा सञ्चालन हुने दोहोरी साँझ र रात्रिकालीन व्यवसायीहरुले कोरोना फैलाउन मद्दत पुर्याइरहेका छन् ।
दोहोरी साँझमा गीत गाउन आउने गायक–गायिकाको मुखमा मास्क छैन । अरुको पनि उही हाल छ । रात्रिकालीन व्यवसायीहरुले कोरोना फैलाउन बढावा दिइरहेका छन् । अत्यावश्यकबाहेक अन्य केही दिनको लागि बन्द गर्दा कोरोनाको जोखिम केही कम गर्न सकिन्छ । अहिले पनि मठमन्दिरहरु खुला छन् । पूजाआजा र धर्म गर्ने नाममा कोरोना फैलिरहेको छ । भीडभाड हुने मठमन्दिरहरु बन्द गर्नुपर्छ । त्यसै गरी पार्टी प्यालेसहरु पनि केही साताको लागि चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । फुटपाथमा पसल राख्न हालका लागि स्थगित गर्नुपर्छ ।
बेलुका ६ बजेपछि सम्पूर्ण पसलहरु बन्द गर्नुपर्छ । होटल, रेस्टुराँहरु पनि बन्द गर्नु नै उचित देखिन्छ । पसलमा बस्ने व्यापारीहरुले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । यसको अनुगमन सरकारबाट भएको छैन । आफू कमाउनको लागि व्यवसायीहरुले सरकारले बनाएको निर्णय पालना गर्न अटेर गरिरहेका छन् । जसका कारण जनता जोखिममा परेको बताइन्छ । सरकारले जनतालाई कोरोना लाग्नबाट बचाउनको लागि तुरुन्तै लकडाउन गर्नुपर्छ । भोलि कोरोनाको बिरामी थेग्न नसक्ने गरी बढ्न सक्छन् । अस्पतालका बेड सबै भरिएर भुइँमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले व्यापारीहरुको कुरा नसुनेर जनता बचाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनता हो । सबैभन्दा पहिले जनतालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । आजभन्दा दुई वर्षअघि एकजना कोरोना संक्रमित भेट्दा नेपालको माहोल तातिएको थियो । ती मरेका नेपाली जनताका आफन्त अझै पनि कोरोनाको त्रासमा बाँचिरहेका छन् । अझै कति मर्न बाँकी छन् । तैपनि सरकार मतलब गर्दैन । सर्वसाधारणको निरासापन सरकारले देखेको छैन । अहिले पनि लामो रुटको गाडी चली नै रहेको छ । विमान पनि उडिरहेको छ । मानिसहरुको ओहोरदोहोर भई नै रहेको छ । रातभरि रात्रिबस चलिरहेको छ । होटल, लज खुल्ला नै छन् । रात्रिबस चल्नमा रोक लगाउन र होटल–लजलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले चासो दिएन । सीसीएमसीको बैठकले पनि भीडभाड हुने स्थानलाई पहिलो महत्व दिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल गर्नुपर्छ । कोरोनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सीसीएमसीले दैनिक नयाँ फैसला गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चासो दिए पनि सीसीएमसीतर्फ जनताको ठूलो विश्वास छ । सीसीएमसीको फैसलाप्रति जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित छ । जनताको विश्वासप्रति सीसीएमसी कडा उत्रिन सक्नुपर्नेछ । कोरोना लागेर धेरै मरिसकेका छन् । अब फेरि पनि जनता मरेको हेर्नुपर्ने दिन नआओस् । यसबारे सीसीएमसीले ध्यान देओस् । उपत्यकाका मेयरहरुले कोरोनाबाट उपत्यकावासी जोगाउन सक्दो कदम चाल्नुपर्छ । लकडाउन गर्ने हो भने सरकारलाई दबाब दिनुपर्यो । उपत्यका भित्रिने नाकाहरु बन्द गर्नुपर्यो । थानकोट र साँगामा कडाइ गर्नुपर्यो । विद्यालय बन्द गरेर मात्र कोरोना रोकिँदैन ।